USA: Mpanao gazety miatrika fitsarana any Korea Avaratra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Jona 2009 13:37 GMT
Saingy andro iray talohan'ny fitsarana azy ireo, nirehidrehitra ny fanehoan-kevitra teo amin'ny tontolon'ny fitorahana blaogy momba izay hoavin'ireo mpanao gazety. Ilay mpitoraka blaogy avy any Etazonia, Angry Asian Man, no loharano nahitàna hoe aiza no ahafàhana manovo vaovao maro momba an'i Ling sy Lee:
Tsy asiana andraso andraso fa androany no fotoana, tena faran'izay lehibe inddrindra ny hanairana ny vahoaka momba ny zava-mahazo an'i Euna Lee sy Laura Ling. Ho fampahafantarana bebe kokoa, tsidiho ity vondrona Facebook ity, izay ahitàna fanavaozana matetika miaraka amin'ny fanampim-baovao ahafahanao mitondra fanampiana. Tairo izao tontolo izao. Afaho ry Euna sy Laura!
Brenna Hamilton, mitoraka blaogy ao amin'ny The Art School Girl of Doom Rides Again, dia mangataka miaraka amin'ny mpamaky ny mba hanehoana fanohanana an'i Ling syLee:
Iray amin'ireo mpitoraka blaogy maro ao amin'ny vondrona blaogy Koreana-Amerikana Kimchi Mamas no naneho ny eritreriny momba ny antony tsy dia nampiraika loatra ny mpampita vaovao nentim-paharazana tamin'ny tantaran'ireto mpanao gazety ireto:
Ho fanampin'ireo hafatra tanaty blaogy, vondrona maro no niforona tao amin'ny Facebook ho fanehoana firaisankina amin'i Ling sy Lee, isan'ireny ity iray ity sy ity. Nisy fanangonan-tsonia iray napetraka ihany koa .
Na eo aza ny hamaroan'ny fanohanana tonga, ny fampitam-baovao dia maminavina fa toa hahazo sazy henjana tokoa i Lee sy Ling. The New York Times dia milaza fa mety hanao asa an-terivozona an-taona maro izy roavavy; ny LA Times no mandroso fa mety ho tonga hatramin'ny 15 taona ny sazy.
Raha te-hahazo vaovao misimisy sy manaraka ny fivoaran'ny toe-draharaha momba an'i Euna Lee sy Laura Ling, tsidiho ny Komity ho fiarovana ny mpanao gazety, fa ao, anatinà lahatsoratra iray vao avy navaozina, olona iray tohina amin'ity raharaha ity no nilaza ny antony maha-tena zava-dehibe ny fanehoana fanohanana ho an'ireo mpanao gazety roavavy: